Ngaba abakhenkethi baseTshayina bayabuya? Ingxelo yeengongoma eziphambili ikhutshiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » | » Ngaba abakhenkethi baseTshayina bayabuya? Ingxelo yeengongoma eziphambili ikhutshiwe
| • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba ezizii-Hong Kong • iindaba • abantu • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IZiko lezoKhenketho laseTshayina likhuphe “iNgxelo yoNyaka kuPhuhliso lwezoKhenketho oluPhumayo lwaseTshayina ngo-2021.”
Ingxelo yakhutshwa nguGqr. Jingsong Yang, uMlawuli weZiko leZifundo zaMazwe ngaMazwe (iHong Kong, Macao kunye neTaiwan Research Institute.)
Ngo-2020, uhambo lwabakhenkethi abaphuma eTshayina luphelele kwi-20.334 yezigidi, ukuhla kwe-86.9% xa kuthelekiswa no-2019. NgoFebruwari ka-2020, inani lokuhamba okuphumayo lehle kakhulu ukuya ngaphantsi kwe-600,000 ukusuka ngaphezulu kwe-10 yezigidi ngoJanuwari. Ukhenketho lwamaqela aphumayo lwema ngokupheleleyo. Uhambo lwabakhenkethi abaphumayo ngo-2021 kulindeleke ukuba lufikelele kwi-25.62 yezigidi, ukonyuka kwe-27% ukusuka ngo-2020.
I-Asiya yaqhubeka iyindawo ephezulu yokundwendwela nge-95.45% yokutyelelwa ngabahambi baseTshayina, ilandelwa yiYurophu, iMelika, i-Oceania kunye ne-Afrika. Lilonke, uhambo oluya kula mazwekazi lwehle nge-70% ukuya kwi-95%, kunye ne-Asia ethatha okona kuhla kuncinci kwaye i-Oceania iyancipha kakhulu. I-Hong Kong SAR, i-Macao SAR, kunye ne-Chinese Taipei yahlala njengezona ndawo zityelelwe kakhulu, zibalelwa ngaphezu kwe-80% yokutyelela.
Iindawo eziphezulu ze-15 zaziyi-Macau SAR, i-Hong Kong SAR, i-Vietnam, i-South Korea, i-Japan, i-Thailand, i-Cambodia, i-US, i-Singapore, i-Chinese Taipei, i-Malaysia, i-UK, i-Australia, i-Canada kunye ne-Indonesia, kunye nokunciphisa ukusuka kwi-66% ukuya. 98%. Ukuhamba kwi-Macau SAR kubonise ukubuyiswa okucacileyo.
Uphando lubonisa ukuba ukhuseleko, umgama omfutshane, kunye nobuqabane zezona ndawo ziphambili kuhambo oluphuma ngaphandle. I-82.8% yabaphenduli baya kuhamba baye kwindawo apho lungasekho usulelo lwe-COVID. Abaphendulayo batyekele ekuphepheni iindawo ezixineneyo. I-81.6% ibonisa ukuba okwethutyana, banokukhetha uhambo lwasekhaya kunokuba bahambe ngaphandle. I-71.7% ithandabuza ukuhamba phesheya ngenqwelomoya ngenxa yokungaqiniseki kosulelo lwe-COVID.
Kuhambo oluphumayo, uninzi lwabaphenduli baya kuthembela kumajelo eendaba ezentlalo kunye neewebhusayithi zokuhamba, kuphela i-25.08% eya kusebenzisa abakhenkethi, okubonisa ukuhla kwe-37.79% xa kuthelekiswa no-2019. Uninzi lwabaphenduli bakhetha "ukuhamba nosapho lonke" kunye "nokuhamba kunye intsapho ethile,” yaye bambalwa abakhetha “ukuhamba bodwa” kunye “nokuhamba nabantu abangabaziyo.” Ngokumalunga nobude bexesha lokuhamba, ngaphantsi kwe-10% bakhetha ngaphezu kweentsuku ze-15 kwaye ngaphezulu kwe-60% isicwangciso se-1 ukuya kwiintsuku ze-7, apho phantse i-50% ikhetha iintsuku ezi-4 ukuya kwezi-7.
Ukhenketho oluphuma ngaphandle luyaqhubeka nokuchatshazelwa ngubhubhani wehlabathi, kwaye zombini iimeko zasekhaya kunye nezaseTshayina azikazinzanga. Kwixesha elizayo, amanyathelo olawulo lwempilo yoluntu aya kuba yinto eqhelekileyo, kwaye abakhenkethi abaphuma eTshayina baya kunqwenela ukhuseleko olungcono kunye nokhuseleko lwempilo. Ishishini lezokhenketho eliphuma ngaphandle liziqhelanisa nesiqhelo esitsha ngokusebenzisa izinto ezintsha zobuchwepheshe kunye nophuculo, kubandakanywa ugonyo, uvavanyo lwe-PCR olukhawulezayo, iikhowudi zempilo yedijithali, njl. Ukongeza, i-5G, iDatha enkulu, i-AI, njl., iyadityaniswa kwimisebenzi yoshishino lwezokhenketho, oluya kunceda ukhenketho oluphuma ngaphandle kwixesha elizayo.
Ingxelo ithi abemi baseTshayina basenomnqweno wokuhamba ngaphandle, bexhaswa luluntu oluninzi, ukufudukela ezidolophini, kunye neemeko ezingcono zoqoqosho. Le Ngxelo ikwaqulathe icandelo elichaza iinzame/utshintsho lweshishini ekutshintsheni ukusuka kukhenketho oluphuma ngaphandle ukuya kukhenketho lwasekhaya ukuhlangabezana neemfuno zemarike.
Icandelo lokugqibela leNgxelo libandakanya uhlalutyo olubalulekileyo lwembonakalo ye-2022.